ရိုဟင်ဂျာများ၏ငါးဖမ်းစက်လှေကိုရခိုင်သင်္ဘောတစ်စင်းမှတိုက်ခိုက် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မောင်တော ။ ။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်း၊ သာဝင်းချောင်း (ဘာ ဆာရာ) မှ ရိုဟင်ဂျာများ၏ စက်လှေ တစ်စင်း ငါးဖမ်းရန် ပင်လယ်ပြင်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ၊ တောင်ကုတ်မြို့မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ဦးတည်၍ သွားနေသော ရခိုင်သင်္ဘောတစ်စင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါ သည်။ ငါးဖမ်း စက်လှေပေါ်တွင် ပါလာသော ရိုဟင်ဂျာခြောက်ဦးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါးဖမ်း စက်လှေအား ၀မ်းဗိုက်ဖောက်၍ နစ်မြှပ် လိုက်ပြီး၊ ငါးဖမ်းသမားခြောက်ဦး အနက် သုံးဦးကို ထိုနေရာပင် သတ်လိုက်သည်။ကျန်ရှိ သည့်သုံးဦးမှာ ရေထဲသို့ ခုန်ချ၍ လွတ်မြောက် ခဲ့သော်လည်း သေ လုမျှော ပါး အ ခြေအနေတွင်ရှိသည်။
ရခိုင်ပင်လယ်ဓါးပြများ၏လူမဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရသူ (၃) ဦးမှာ –
(၁) ကိုရှာဘ်မျာ (ဘ) ဦးအလီအဟမတ် (အသက် ၂၆ နှစ်)
(၂) ကိုနူရ်အစ္စလာမ် (ဘ) ဦးဖဇလ်အဟမတ် (အသက် ၂၈ နှစ်)
(၃) ကိုစီရာဇူလ်ဟောက် (ဘ) ဦးကာစင် (အသက် ၂၃ နှစ်) – တို့ဖြစ်သည်။
တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ရေထဲသို့ခုန်ချ၍လွတ်မြောက်လာသူ (၃) ဦးမှာ –
(၁) ဦးနူရ်ဟူစီန် (ဘ) ဦးဖေဒန်အလီ (အသက် ၅၀ နှစ်)
(၂) ဦးဇာဟီဒ်ဟူစီန် (ဘ) ဦးအလီအဟမတ် (အသက် ၃၀ နှစ်)
(၃) ကိုဟာရှင်အုလ္လာ (ဘ) ဦးဟာဘီ (အသက် ၂၇ နှစ်) – တို့ဖြစ်သည်။
အသတ်ခံရသူ (၃) ဦးနှင့် တိုက်ခိုက်ခံ ရပြီးနောက် လွတ်မြောက်လာသူ (၃) ဦးတို့မှာ သာဝင်းချောင်း (ဘာဆာရာ) ရွာမှဖြစ် ကြသည်။ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာသူ (၃) ဦးမှ အခင်းဖြစ်စဉ်ကို နယ်မြေခံ နစက သို့အကြောင်းကြားသော်လည်း နစကမှ “ကုလားသတ်ခံ ရတာဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ကြားရတာဝမ်း သာစရာဘဲ” ဟုပြန်လည်ပြောဆိုပြီး၊ တိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုသာ ငွေညှစ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ကျောက်တော် ။ ။ ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင်နေထိုင်ကြသော ရိုဟင်ဂျာများနှင့်ကမန်မွတ်စလင်များ အား ရခိုင်အစွန်းရောက် များက ထပ်မံတိုက်ခိုက်ရန် အမြဲတစေကြိုးပမ်း လျက်ရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် ပိုက်သေရွာနှင့် တောင်ပေါ်ရွာများမှ ရခိုင်အစွန်းရောက်များ သည် ဇိုက် လာ ဖာရာ အနီးရှိ ရထားလမ်း တလျှောက်တွင် စုဝေးပြီး ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များကို တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုး စားခဲ့ သည်။ ထိုသို့ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း ရိုဟင်ဂျာရပ်မိရပ်ဖများမှ ကြိုတင် သတင်း ရရှိ ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရခိုင် အစွန်းရောက် များ၏ကြိုတင်စီမံမှုများ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ကျောက်တော်မြို့နယ်ရှိမွတ်စလင်များ၏ လုံခြုံရေး အားနည်းမှု၊ ရခိုင်အစွန်းရောက်များမှ တိုက်ခိုက်ရန် အမြဲတစေကြိုးပမ်းနေမှု များကြောင့် ယမန် နေ့က ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ၂၅၀ ဦးခန့် ကျောက်တော်မြို့မှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရပါသည်။ သို့သော် လည်း မည်သည့်နေရာ ပြောင်းရွှေ့ သွားခြင်းကို မသိရဘဲ ခရီးဦးတည်ရာ မရှိဘဲ ဘင်္ဂလားပင် လယ်အော်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ဖိနှိပ်မှု မရှိသည့်နေရာကို ရောက်ရှိရန်နှင့် ကံကြမ္မာ ကြောင်းနိုင်မည့်ကို ဦးတည်၍ သွားကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်။
This entry was posted on February 5, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← British MPs Support Rohingya Motion In Parliament